Abakhiqizi nabahlinzeki be-Stainless Steel Pet China Engagqwali Pet Inzalo Factory
Pet Groomer Finishing Ikama
Le khekhi yokuhlanza isilwane i-Heavy Duty, isisindo esincane kakhulu, kepha iqinile.Ine-aluminium eyindilinga emuva ne-Anti static coating ngakho-ke inganciphisa ukuma.
Isilungisi sezilwane esiqeda ikamu ngamazinyo ensimbi angenansimbi ashelelayo, singena emajazini aminyene kalula.
Le khekhi yokuqedela isilwane inamazinyo amancane futhi abanzi.Singasebenzisa ukuphela okuhlukanisiwe okubabazekayo ezindaweni ezinkudlwana, kanye nokuphela okuhlukanisiwe kwezindawo ezincane.
It is a ikamu isilwane kumele for zonke isikhwama somkhongi.
Metal Pet Finishing Ikama
Ikama lensimbi eliqedela insimbi liyikama elibalulekile elingagcina isilwane sakho sihlanzekile futhi sinempilo ngokususa ama-tang, amakesi, izinwele ezikhululekile kanye nokungcola.
Ikama lensimbi lokuqedela insimbi alilula, lisebenziseka kalula, futhi kulula ukuliphatha.
isilwane sensimbi esiphetha amazinyo enkama sinokuhlukaniswa okuhlukile, Izinhlobo ezimbili zokuhlukaniswa kwamazinyo, Izindlela ezimbili zokusebenzisa, ezisebenziseka kalula futhi ezingasebenziseka zinganikeza ukuzilungisa okuphelele.
Insimbi Engagqwali Inja Ikama
Leli kamu lenziwa ngezinto zensimbi engagqwali, evikela ukugqwala nemelana nokugqwala, eqinile, eqinile futhi okungelula ukuyiphula.
2.The insimbi engagqwali inja ikamu yakhelwe nge ebusweni bushelelezi futhi iqine, amazinyo nxazonke inja ikamu ngeke bhala isikhumba isilwane futhi izonikeza ukhululekile ukuzilungisa isipiliyoni ngaphandle ukulimaza isilwane sakho, futhi kungaba ngempumelelo ukuvimbela ugesi static.
3.Lelikama lenja lensimbi engagqwali lisiza ukususa izinja namakati amakati, amacansi, izinwele ezikhululekile kanye nokungcola, kubuye kuvuselele isikhumba futhi kuthuthukise ukujikeleza kwegazi, okuhle kakhulu ekuqedeni nasekuhlanzeni izinwele zesilwane sakho.
Engagqwali Ikama For Pet
Leli kamu lesilwane sakhiwe ngensimbi engagqwali eqinile
Ikama le-Stainless steel lesilwane lifanelana kahle nesandla futhi lihlala likhululeke isikhathi eside kakhulu kunamakhemikhali endabuko.
Ikama lensimbi engagqwali lesilwane esifuywayo linamazinyo abanzi.Lilungele ukuxega amacansi noma ukunikela ukubonakala okuqediwe kwengubo.Lifanele futhi lezo zindawo ezibucayi njengobuso nezidladla.
Ikama le-Stainless Steel lesilwane liphelele ekuqedeni nasekubhebhetheni, linikeze othandekayo wakho ukubukeka okulungisiwe.
1.Amazinyo enkomo yensimbi ebushelelezi yensimbi angakwazi ukuvikela kangcono isikhumba sezinja ngaphandle kokulimala, asuse izigaxa / amacansi / izinwele ezikhululekile nokungcola, kuphephile esikhunjeni sesilwane sakho esibucayi.
2.Isihlanganisi sensimbi yensimbi yensimbi senziwe ngekhwalithi ephezulu yensimbi engagqwali, ubulukhuni obuphezulu, akukho ukugqwala futhi akukho ukusonteka.
Ikamu lensimbi lensimbi lensimbi linamazinyo amancane namazinyo aminyene.amazinyo amancane angasetshenziselwa ukwenza izitayela zezinwele zezinja namakati, futhi amafindo ezinwele eziminyene angasetshenziswa kalula yingxenye eminyene.
I-Metal Inja Yokuzilungisa
Ikama lezinsimbi lokulungisa izinja liphelele ekuchazeni izindawo ezithambile zoboya ezizungeze ubuso nemilenze, kanye nokukama uboya obuzuziwe obuzungeze izindawo zomzimba.
2.Ikama lensimbi lokulungisa izinja liyikama elibalulekile elingagcina isilwane sakho sihlanzekile futhi siphilile ngokususa iziphazamiso, amacansi, izinwele ezikhululekile, nokungcola, kushiya izinwele zakhe zihle kakhulu futhi zintofontofo.
3.Kuyinhlanganisela engasindi yokukhathala. Lokhu kuyikamu lokuzilungisa inja eliphelele okumele libe nalo ngokuphelele ukusiza ukugcina inja inezigqoko zangaphansi. Ama-Combs amazinyo abushelelezi wokuzilungisa okuphelele. Amazinyo anokuphela okuzungezile abhucunga ngobumnene futhi ashukumise isikhumba sesilwane sakho ukuthola ijazi elinempilo elibonakalayo.